Dụgharịa ihe ndekọ sava ọrụ na Debian na Samba | Site na Linux
Tọ ntọala ihe ndekọ ndekọ ọrụ na Debian na Samba. Akụkụ mbụ
Ha bụ Njikọ | | Netwọk / Sava
Ndewo onye ọ bụla. N'ime usoro ọmụmụ a, aga m akụziri gị otu esi edozi sava Ọrụ ndekọ maka netwọk na kọmputa Windows ala Debian (Ọ bụrụ na anyị ga-edozi sava, anyị ga-eme ya nke ọma, nkụ) Na nke mbụ a, m ga-akọwa ntinye na nhazi nke ihe nkesa ahụ na nke abụọ m ga-akuzi otu esi eji ya ngwaọrụ nchịkwa de Windows 7 na otu esi esonye kọmputa na ngalaba (Windows 7 n'onwe ya na a Windows XP). Emechaa m ga - eme nkeji nke atọ ma ewezuga otu m ga esi esonye ndị otu na GNU / Linux ebe ọ bụ ihe m ga - anwale.
Echiche a bịakwutere m mgbe m (ma ọ bụ nọ, ọ dabere na mgbe ị gụrụ ntinye a) na-aga nkuzi na iku Microcomputer Equipment Repair Technician nke anyị guzobere sava netwọkụ na Windows 2008 (abụghị RC2) na m malitere na-achọ ma ọ bụrụ na m nwere ike mejuputa otu ihe n'okpuru GNU / Linux ihe ọ rụpụtara dị ezigbo mma, ọbụlagodi onye nkuzi m tụrụ na ọsọ sava ahụ.
Tupu ịga n'ihu, na n'ezie ọtụtụ n'ime gị na-ajụ onwe gị, Gịnị bụ Akwụkwọ ndekọ Ọrụ? Ọfọn, ọ bụ okwu Microsoft na-eji zoo aka na ngwaọrụ ya maka njikwa netwọkụ dịka sava ahụ DNS, nchịkwa nke ndị ọrụ netwọkụ, wdg.
Anyị ga-achọ ihe ndị a:
Debian na ngalaba ya (na Wheezy 7.5 na XFCE dị ka desktọọpụ)
A ahịa na Windows 7 / 8 / 8.1 na ngwugwu iji wụnye ọrụ nchịkwa nkesa dịpụrụ adịpụ (achọrọ iji jikwaa ihe nkesa ahụ, dị ka kekọrịta nchekwa na ndị ọrụ). A ga-akọwa nke a na nkuzi ọzọ.
0.1 Tọ ntọala ihe nkesa
1 na otu esi eme ka ha rụọ ọrụ. Maka ozi ndị ọzọ, lee ihu (5).
2 The loopback netwọk interface
3 Isi network interface
3.1 Wụnye Samba 4
Tọ ntọala ihe nkesa
Tupu ịga n'ihu, anyị ga-edezi ụfọdụ faịlụ ka ihe niile wee rụọ ọrụ, ọkachasị ka kọmputa na netwọkụ chọta ngalaba sava.
Ihe mbu bu inye anyi saiti anyi IP idozi. N'ihe banyere m Debian ule na Virtualbox jiri netwọk, nke bụ ihe na-abịa site na isi, mana na ezigbo sava m na-ahazi ya Onye njikwa network, yabụ m ga-akọwa etu esi eme ya abụọ.
Faịlụ mbụ anyị ga-edezi bụ / wdg / netwọk / ihu.
na otu esi eme ka ha rụọ ọrụ. Maka ozi ndị ọzọ, lee ihu (5).
The loopback netwọk interface
Isi network interface
ọnụ ụzọ ámá 172.26.0.1
adreesị: IP nke otu anyị.
netmask: nkpuchi nkpuchi. Na obere netwọkụ ma ọ bụ ụlọ ọ na-abụkarị nke a.
ọnụ ụzọ ámá: ọnụ ụzọ ámá. Nọmalị ọ bụ IP nke rawụta nke na-enye anyị ụzọ ọpụpụ na .ntanetị.
dns-nameservers: Nkesa IP DNS. Na nke a ihe nkesa, ma ị nwere ike itinye nke abụọ, dịka ọmụmaatụ ọhaneze Google.
Ikpeazụ 2 na-egosi na ngalaba aha aha na ngalaba aha ya.
Ugbu a, anyị ga-agbakwunye usoro ndị a / wdg / ụsụụ ndị agha:
127.0.0.1 Matrix.clase.org Matrix
192.168.0.67 Matrix.clase.org Matrix
Nke a ga-edozi ngalaba aha ahụ ka enwere ike ịchọta ya na netwọkụ. matriks bụ aha m nyere ihe nkesa.
N'ikpeazụ anyị dezie /etc/resolv.conf:
Na ụfọdụ nkuzi m hụrụ, ha gbakwunye akara ọzọ nameserver na di na nwunye ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe, mana na nke m naanị otu ahịrị zuru.
Ugbu a, anyị malitegharịrị ọrụ ntanetị na ọ bụ ya:
Onye njikwa network
Pịa aka nri na akara ngosi netwọ ma họrọ Dezie njikọ. Anyị ga - enweta netwọkụ ndị anyị ahazịrị, mana naanị anyị nwere mmasị n’ịkpọ oku 1 ma ọ bụ ihe ọ bụla ị kpọrọ ya. Anyị na-pịa ya ugboro abụọ na windo ọhụrụ ga-apụta ma anyị ga-aga Ntọala IPv4. na usoro anyị họrọ Manual. Ugbu a pịa na Tinye ma jupụta n'ọhịa niile:
Ugbu a, anyị na-aga taabụ General na anyị na-ahụ na ọ na-akara Ndị ọrụ niile ga-ejikọrịrị netwọk a. Pịa na Chekwaa anyị wee pụọ.
Wụnye Samba 4
N'okwu anyị, anyị ga-ebudata ma chịkọta Samba 4 site na ibe ya n'ihi na Debian ọ bụ naanị site na repository Azụ azụ o nyekwara m nsogbu ịdabere na ya.
Anyị na-aga http://samba.org iji budata nsụgharị ọhụrụ kacha ọhụrụ wee mepee ngwugwu ahụ na folda.
Ntughari ohuru ohuru n'oge edere isiokwu a bu 4.1.8 ya mere ọ ga-abụ otu anyị na ya ga-arụkọ ọrụ.
Iji chịkọta ya, anyị kwesịrị ịwụnye nchịkọta ndị a:
apt-get install build-essential libacl1-dev libattr1-dev \_
Ozugbo ebudatara ma budata, anyị mepee ọnụ ma gaa na folda ahụ ma mezuo iwu ndị a:
Ndabara ndabara dị na / usr / local / samba. Ọ bụ ezie na ọ na-akwado oke –prefix = / usr OBU wụnye ya na ndekọ ndekọ kwekọrọ (dịka ọmụmaatụ ọnụọgụ abụọ anaghị etinye ha / usr / bin)
Ugbu a, anyị na-agbakwunye ụzọ ọhụrụ dị na AHỤ. N'okwu m na / wdg / bas.bashrc itinye aka na ndị ọrụ niile, gụnyere mgbọrọgwụ.
Anyị mekwara njikọ n'ime / wdg maka Samba ịchọta faịlụ nhazi:
ln -s /usr/local/samba/etc/ /etc/samba
Anyị na-aga hazi ihe nkesa Samba. Maka nke a anyị na-emezu:
samba-tool domain provision --realm=clase.org --domain=CLASE --adminpass=Contraseña --use-rfc2307
–Alaeze: bụ aha ngalaba zuru ezu.
–Domain: bụ ngalaba. Kwesịrị ịdị na mkpụrụedemede ukwu
–Ndagbara: bụ paswọọdụ nke onye nchịkwa netwọk.
–Ji-rfc2307: iji rụọ ọrụ AC.
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma mgbe obere oge Samba ga-emecha ịhazi onwe ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmara nhọrọ niile ga - ekwe omume, mee ọsọ:
samba-tool domain provision -h
Ugbu a, anyị ga-edezi faịlụ ahụ /etc/samba/smb.conf. Maka ugbu a, ihe masịrị anyị bụ usoro ndị a:
dns forwarder = 192.168.0.1
Ahịrị ga-arụtụ aka na sava DNS nke na-enye anyị ohere ịntanetị (na nke a, rawụta). Samba na-ewe ndabara netwọk nhazi ma ọ na-atụ aro iji nyochaa ya.
Ugbu a, anyị amalite ọrụ:
na anyị na-elele njikọ site n'ịrụ:
Ma ọ bụrụ na ihe niile ziri ezi, anyị ga-ahụ ihe yiri nke a:
Ọ bụrụ na ọ na-enye anyị njehie njikọ, anyị na-enyocha usoro nke isi ihe gara aga. Ihe ndekọ Samba dị na /usr/local/samba/var/log.samba
Ugbu a, anyị ga-e copyomi faịlụ ahụ /usr/local/samba/private/krb5.conf a / wdg. Ugbu a, anyị ga-elele na anyị nwere ike ijikọ:
Ojo, na ngalaba a ga-capitalized.
Mgbe ahụ ọ ga - ajụ anyị maka okwuntughe onye ọrụ (na nke a, nke onye nchịkwa) ma ọ bụrụ na anyị enweta ozi yiri «Ịdọ aka na ntị: Paswọọdụ gị ga-ekubi ume ke usen 40 ke Mon Jul 14 13:57:10 2014» ọ bụ na ọ pụta n'ụzọ ziri ezi.
Ma ruo ugbu a akụkụ mbụ nke nkuzi. Anyị na-agụ na ndị na-esonụ.
M ekwuola ya ọtụtụ ugboro na nkwupụta, mana m tinyere ya ebe a. N'ihi eziokwu ahụ bụ na enweghị m ihe dị mkpa ugbu a (naanị m nwere PC n'ụlọ ma nke a na-agbanye n'oge oge ọ ga-aga) yana ị na-eme ya na igwe ọrụ ọfụma, ọ gaghị ekwe m omume ịga n'ihu. Ọ bụrụ na onye nwere ihe ọmụma na otu chọrọ ịnọgide na nke a, ha nweere onwe ha ime ya)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Tọ ntọala ihe ndekọ ndekọ ọrụ na Debian na Samba. Akụkụ mbụ
Ihe 44 kwuru, hapụ nke gị
Na-akpali mmasị, Achọrọ m ịma otu esi eme ya.
Enwere ike ime ya iji SSH kama Samba?
M na-aghọta na ọ bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa na odi mfe.
Ha bụ Njikọ dijo
M ga-enyocha ya.
Zaghachi Nwa Link
Enyi. Nwere ike kọwaa m usoro nhazi usoro iji nwee ike itinye ntanetị site na onye ọrụ Windows XP na-arụ ọrụ na usoro nke kọmputa na usoro ọrụ LINUX NA VISEVERSA nke a na-ekwu site na LINUX SER SO WINDOWS.
Claudio Concepcion onye dobere onyogho dijo
Ezigbo Lolo, nke ahụ agaghị ekwe omume, ebe SSH na-enye ohere nnọkọ (yana ihe ndị ọzọ, dị ka ịnyefe faịlụ na ngwa) site na ọnụ n'etiti kọmputa na GNU Linux. Ọ bụ ezie na Samba ihe bụ ihe ọzọ maka GNU Linux nke sistemụ arụmọrụ Microsoft.
Son Link ihe o mere bụ ngalaba njikwa na GNU Linux.
Zaghachi Claudio Concepcion
Ezigbo mma tuto. Ọ dị mma maka ndị dị ka m bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ya. Daalụ nke ukwuu
Daalụ! Ezigbo ndu. Kwado…
Otutu 87 dijo
I meela enyi, ezigbo onye ndu gi. Enwere m olile anya na akuku nke abuo, site na uzo i meworo ya ka o jiri ldap na aru oru?
Na-akpali mmasị, M na-eche na-aga n'ihu. Daalụ. ^ _ ^
PS: Echere m na enwere mperi transcript na nhazi / wdg / netwọkụ / ihu, ọ na - ekwu dns-domian mgbe ọ dị m ka ọ ga - aga dns-domain.
Gbazie. Daalụ maka ịdọ aka ná ntị ^^
wilson ruiz dijo
Ahụrụ m isiokwu a nke ọma. Ebe ọ bụ na m nọ na mmụta na enweghị m ọtụtụ ihe ọmụma n'okwu a ma achọrọ m ịmụtakwu banyere njikwa na nchịkwa nke sistemụ arụmọrụ.
Zaghachi wilson ruiz
Nke ahụ ọ dị mma maka ịmekọrịta folda na Debian ka ọ bụ na ọ na-aga maka nkuzi ọzọ n'ụzọ ahụ?
Enwere nkesa Linux a na-akpọ Resara Server dabere na Ubuntu nke na-eje ozi naanị iji wuo ngalaba njikwa, agbalịrị m ya ma ọ dị mfe iji, enwere m ike ịbanye na kọmpụta na ngalaba ahụ na sava ahụ, ana m ahapụ ebe a, howto, ma eleghị anya mmadụ ga - ahụ ya bara uru - http://ostechnix.wordpress.com/2012/12/31/resara-server-an-alternative-opensource-linux-domain-controller-for-windows-active-directory-controller/
Oh !!! Nnukwu, onyinye nke ụbọchị .. Daalụ 😉
A na m asị gị nnọọ! 😀
Daalụ maka ịkekọrịta. Mgbe ahụ, m na-ele ya anya
Daalụ maka ịkekọrịta !!!
Ezigbo nkuzi, a ga m echere ndị ọzọ. Echetara m mgbe m wụnye PDF na Debian 6 na samba 3 na ldap. Ọ na-arụ ọrụ mana m ga-eji ndebiri .pol dezie ntuziaka. N'okwu a, kedu ka esi achịkwa iwu ndị a?
A ghaghị ime usoro iwu ndị ọrụ na otu site na onye ahịa Windows 7/8 / 8.1 yana ngwugwu njikwa ntanetị. Ọ bụ ihe m ga-akọwa na nkeji ọzọ. Anọ m na-achọ ịhụ ma enwere ụzọ m ga-esi mee ya na-enweghị ike ịbanye na ya, mana ahụghị m ihe ọ bụla na na Samba wiki ọ na-ekwu ya otu a, opekata mpe maka kọmputa Windows, mana m ga na-ele anya, yabụ echere m na ọ ga-ewe obere oge ntakịrị iji bulite nkeji ọzọ.
Mario Guillermo Zavala Silva dijo
Ezigbo ozi ... Daalụ maka nke a ...
Zaghachi Mario Guillermo Zavala Silva
Magburu onwe…. Enwere m mmasị na nke a ……. maka mgbe nke abuo ??? ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ ntuziaka nke a zitere m site na email ... biko !! daalụ
Ọfọn, na izu, ma enweghị m ike ịgwa gị oge ọ bụla, ebe ọ bụ na n'etiti klaasị na ọrụ m na-arụ ọrụ, m na-arụsi ọrụ ike.
Enwere m olileanya na otu ụbọchị itinye ya n'ọrụ ..
Ekele m chere maka akụkụ nke abụọ !!!!
Eziokwu bu na m mere nke a otu mgbe, mana abanyeghi m ihe obula ... Achọrọ m ịkwado / ị bụ ngwa ọrụ, amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara ya ma ọ bụ na amaghị, amaghị m oke ya, mana ijikọ na Ndekọ Ndekọ Ọrụ Enweghị m nsogbu, agbalịrị m ya na kọleji ma rụọ ọrụ nke ọma. A na-akpọ mmemme ahụ N'otu aka ahụ, ọ na-eme otu ihe ahụ dịka ihe niile ị mere na Samba, ọ dịghị ihe karịa na ị naghị hazi nke ukwuu, ọ bụ ihe a chịkọtara, n'ezie ị nwere ike gbanwee ihe ịchọrọ iji masị gị 🙂
Olileanya na nke a nwere ike inyere gị aka! Cheers
Ihe na-adọrọ mmasị, m ga-atụ anya oge nke abụọ. Ọ bụ nnukwu ihe ijuanya ịchọpụta na ọ ga-ekwe omume ijikwa ndekọ "ọgbara ọhụụ" na Gnu / Linux, echetara m na m mere ya ogologo oge gara aga site na iji ndekọ NT 4 na-arụsi ọrụ ike na ọ bụ nnukwu ndakpọ olileanya na enweghị ike omi ya mgbe Microsoft gbanwere "Ọdịdị" nke LDAP gị na Windows 2000 Server.
Ekele si Ecuador =]
Ndewo. Daalụ nke ukwuu!
Enwere m obi abụọ… kedu kpọmkwem ihe ndekọ aha nọ n'ọrụ?
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike kuziri, ọ bụrụ na ị nwere ike, otu esi aga nyocha nke ndị ọrụ na-eme?
Ekele na ekele.
M maka audior emejuputa nke a: http://chicheblog.wordpress.com/2011/01/21/como-auditar-la-actividad-de-los-usuarios-en-samba/
Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbasa ya, ma ọ bụ tinye ihe ị maara, ọ nwere ekele!
Zaghachi ka mmm
Abali oma, Ekele si na Peru.
Enwere m ajụjụ dịtụ iche na ihe niile e bipụtara, lee ịkọwa ntakịrị, lee m ka edozi folda a na file /etc/samba/smb.conf
ikwu = Onwe nchekwa
ụzọ = / ụlọ / Nkeonwe
gụọ naanị = ee
browseable = ee
ọbịa ok = mba
ohaneze = mba
dee ndepụta = @comercial, @gestion
ezigbo ndị ọrụ = @comercial, @gestion
imepụta nkpuchi = 0777
nkpuchi ndekọ = 0777
Ugbu a ajụjụ m na-aga, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma mana mgbe m si na kọmputa m banye na onye ọrụ «pepe» nke otu «comercial» na site na kọmpụta ọzọ m abanye na onye ọrụ «coco» nke otu «gestion», ihe ndị a na - eme mgbe m mepụtara faịlụ ma ọ bụ folda site na onye ọrụ "pepe" ma achọrọ m ihichapụ ndekọ a ma ọ bụ faịlụ a mepụtara site na PC ọzọ na onye ọrụ "coco" ọ na - agwa m na enweghị m ike n'ihi na enweghị m ùgwù, ma-ede akwụkwọ nwere ike ihichapụ a faịlụ ma ọ bụ ndekọ na, ị iru.
Ekerela folda nzuzo site n'ụzọ dị otu a:
chmod -R 777 / ulo / Onwe
Ha na-arụ ọrụ n'okpuru otu netwọk LAN.
M na-eji Distro Ubuntu Server 14.xx
Ekwesiri ighota na ihe m choro bu ka ndi 2 ma obu ndi ozo jiri ya dochie folda a nke oma n’ebe a echiche nke iso ndi otu na aru oru ma odi ka enwere ihe m n’enweghi ma obu idepu ya, enwere m anya na uche gi ma m na etinye anya na ihe gi na ekwu.
Zaghachi na RaulBaca
Enyi i nwere ike imezu site na iwepu commas
n'ụzọ nke a.
dee ndepụta = @comercial @gestion
ezigbo ndị ọrụ = @comercial @gestion
Raúl Baca Centeno dijo
Ọ ga-amasị m ịmara ma akụkụ nke abụọ nke usoro a ka na-eche, A na m echekwu okwu gị echiche ma daalụ.
Zaghachi Raúl Baca Centeno
Ọfọn, enwere ike ọ bụghị kemgbe m amaghị isi iji mee ya ma ha ajụla m ajụjụ m na-enweghị azịza ya, yabụ ahụrụ m na ọ kachasị mma ịghara ime akụkụ nke abụọ ahụ, ebe ọ bụ na, n'eziokwu, soro akụkụ ọzọ obere ihe ọmụma, na-enweghị ihe ndị dị mkpa (naanị m nwere PC m ma jiri Virtual Machines na-eme ya bụ ihe siri ike ma ha anaghị atụba oge mbụ)
Ọ dị m nwute na nke a, mana site na echiche m, ọ bụ maka ọfụma. Ọ bụrụ na a gbaa onye ọzọ ume ime akụkụ nke abụọ ahụ n'ihi na ha nwere ihe ọmụma, ha nwere onwe ha ime ya
Ezi ehihie, naanị taa m gụrụ ihe niile m kwuru na m nwere igwe ahazi ọkara, n'ihi nke a achọpụtara m na ị gaghị ebipụta akụkụ nke abụọ na achọrọ m ịma ma ị nwere ike ịnwepụta na folda yana ọtụtụ dbf tebụl, iji nweta site na ọtụtụ kọmputa.
Biko zaghachi ozugbo enwere ike.
Raul baca dijo
Ọ ga-amasị m ịmata ma akụkụ nke abụọ nke nkuzi a na-atọ ụtọ ka na-echere, ana m ekele gị n'ọdịnihu maka nlebara gị.
Zaghachi ka Raul Baca
Ezigbo nkuzi, enwere m olileanya na ị ga-akwado akụkụ nke abụọ, ị nwere ike ịgwa m nke bụ ngwaọrụ njikwa ihe nkesa na ntanetị iji budata ma nwalee ha.
Ekelere m gị, na akụkụ nke abụọ?
Daniel Bernal dijo
Edemede mara mma, ị wepụtara nsụgharị ọzọ?
Zaghachi Daniel Bernal
chepụtara echiche dijo
Ezigbo nkuzi, naanị otu ajụjụ akụkụ nke abụọ, olee otu ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụ jiri nkuzi a mechie?
M dị ka echiche nke ịmụ ihe ọhụrụ, Daalụ David maka ịkọrọ gị ihe ọmụma,
AKWOSKWỌ: NA isiokwu nke mmụta M ga-anwa ime ya na igwe m, ha ga-abụ onye nkesa na otu ndị ahịa nke ndị ahịa, ndị nwere mmeri 7 na ndị ọzọ nwere mmeri 8.
Ntuziaka a ezughi oke, ị naghị ezipụta akwụkwọ ndekọ aha, ị na-ahapụ ihe ọ bụla, ọ bụrụ na m bụ gị, m ga-emeghachi ya
Zaghachi ka edgar
Ma ọ bụ ị nwere ike mezue ya ma dee ya n'onwe gị, anyị ga-eji obi ụtọ bipụtara gị ya.
ada odi dijo
otu esi ahazi ihe nkesa na debian 5 iji nwee ike jikọọ remotely na xp
Zaghachi ka ada tapia
Kedu ka m si eme mgbe m mere:
mgbọrọgwụ @ pdc: ~ # apt-nweta wụnye-mkpa libacl1-dev libattr1-dev libblkid-dev \_ libgnutls-dev libreadline-dev python-dev libpam0g-dev \_ python-dnspyth gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev \_ dnsutils libbsd-dev attr krb5-onye ọrụ docbook-xsl libcups2 ac1
Ndepụta ngwungwu… Emela
Ewu osisi na-adabere
Agụ ozi steeti… Emela
Ngwugwu ngwugwu-ihe di nkpa adighi, mana ngwungwu ozo zoro aka.
Nke a nwere ike ịpụta na ngwugwu ahụ na-efu efu, agbaghaala, ma ọ bụ
dị naanị site na ebe ọzọ
E: Ihe ngwugwu ngwugwu enweghi ihe ntinye
enyemaka ọ bụla? ekele
emezigharị nchekwa nchekwa
Amaara m na ị gaghị ebipụta okwu m. Edemede ahụ dị oke njọ, ọ na-ekwughi otu esi ahazi kerberos, ebe ị tinyere ya na ihe ndị achọrọ. Gini mere ichikota Samba? Nke anọ dị ugbu a. Site na nhazi ịtọhapụrụ gị, Kinit na-enye gị njehie ofesi NT_STATUS_DENIED!. Maka ndị niile nwere mmasị ịmalite: https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/samba-dc.html
Buru n’uche na m bipụtara edemede a afọ 3 na ọkara gara aga na mgbe m mere ya, Samba 4 anọghị na nchekwa dị ka m kwuru n’isiokwu ahụ, ọ bụ ya mere ọ ga-eji chịkọta, yana dịka m kwuru na ejedebe m enweghị ike ịga n'ihu ya. Na uzo ozo nke m bu ha na-akuziri anyi ihe a (obu ezie na ihe di nkpa) ma ugbua amalitere m igbaligota ya ozo, nani na igwe mebere na nke a, mana o bidoro inyem nsogbu a. na say na-ekwu na amalitere m ịjụ ịhụ ihe na-eme ebe ọ bụ na ekwuru na njehie enyeghị m ya mgbe ahụ. A, na ekele maka ịkekọrịta njikọ ahụ.
Forks: Gini bu ebe Desktop nke kacha karie?
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 17 Qiana